I-Todo eReaders yiwebhusayithi eyasungulwa ngonyaka ka-2012, lapho abafundi be-ebook babengakaziwa kangako noma bevame kakhulu futhi kuyo yonke le minyaka sekuyinto inkomba ngaphakathi kwezwe labafundi be-elekthronikhi. Iwebhusayithi lapho ungaziswa khona ngezindaba zakamuva emhlabeni zama-eReaders, ukwethulwa kwamuva kwemikhiqizo ebalulekile efana ne-Amazon Kindle neKobo nokunye okuncane okungaziwa njengeBq, Likebook, njll.
Sigcwalisa okuqukethwe nge ukuhlaziywa kwedivayisi kobuchwepheshe. Siwahlolisise ama-eReaders amasonto amaningi ukuze sitshele ulwazi lwangempela lokufunda ngokuqhubekayo ngamunye wabo. Kunezinto ezibalulekile njengokubamba nokusetshenziswa okuyizinto ezizocacisa umuzwa omuhle wokufunda ngedivayisi ongenakubalwa uma ngabe ubone kuphela le divayisi futhi ube nayo esandleni imizuzu embalwa.
Sithemba ikusasa lokufunda kwedijithali nama-eReaders njengamathuluzi nezixhasi zalo. Sinake zonke izindaba nobuchwepheshe obusha obufakwe kumadivayisi asemakethe.
Ithimba lokuhlela le-Todo eReaders lakhiwa iqembu le- ochwepheshe bama-eReaders nabafundi, amadivayisi nesoftware ehlobene nokufunda. Uma nawe ufuna ukuba yingxenye yeqembu, unga sithumele leli fomu ukuze sibe ngumhleli.
Ngingumphathi Wephrojekthi ku-Actualidad Blog, ngizifela nge-eReaders nomvikeli wokushicilela okudijithali, ngaphandle kokukhohlwa okuvamile 😉 ngine-Kindle 4 ne-BQ Cervantes 2 futhi ngifuna ukuzama i-Sony PRST3
Inhloso yami yamanje ukuvumelanisa izinganekwane nobuchwepheshe kusukela ngesikhathi engiphila ngaso. Ngenxa yalokhu, ukusetshenziswa nolwazi lwezinto zobuchwepheshe ezifana ne-E-Reader, engivumela ukuthi ngazi eminye imihlaba eminingi ngaphandle kokushiya ikhaya. Ukufunda izincwadi ngale divayisi kulula kakhulu futhi kukhululekile, ngakho-ke angidingi lutho olungaphezu kwe-E-Reader esezingeni.
Umhleli kanye nomhlaziyi we-geek. Umthandi wamagajethi nobuchwepheshe. "Ngicabanga ukuthi kungenzeka ukuthi abantu abajwayelekile bakhethe ukwenza okungajwayelekile" - u-Elon Musk.
U-Asturian, uyaziqhenya ngokusuka eGijon ukuze abe ngqo UTechnical Engineer othandana nama-ereaders selokhu aphuma. Kindle, Kobo, ... Ngiyakuthanda ukwazi nokuzama ama-e-book ahlukile, ngoba ahlukile futhi konke kuningi angakunikeza.
Kusukela ngathola i-Kindle PaperWhite bekuyinto yami yokufundwa ngaphambi kokuvumela olunye usuku ludlule. Lokho cishe "ukushiseka ngokweqile" kwama-eReaders ngizozama ukukudlulisela kumaTodo eReaders.